Xaggee baad doonaysaa in ay tagaan safar guga this? - Jomo Technology Co., Ltd
Spring waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda, aad jeclaan lahayd si ay u tagaan safar waqti kasta? Ama aad rabto inaad ka soo tago oo sahamiyaan Caalamka kala duwan? Ma rabtaa in aad naftaada ama qoyskaaga siin fasax cajiib ah oo kaamil ah?
Haddii jawaabtu tahay Haa, fadlan dooro maalin qoraxdu inuu baxo, markaas aad qabsan doonaan muuqaal aan la filayn dhamaadka safarka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waa su'aal, nooca gaadiidka ha aad jeceshahay in aad doorato, diyaarad ama tababar? Wax kasta oo aad doorato, marka aad meel gaaray dhamaadka safarka ah, waxaad u baahan tahay gaadiid aad u wanaagsan-masaafada gaaban. Laakiin taas oo safar-masaafada gaaban aalad waa ninka ugu fiican?
Maalmahan, ka rullebrett Electric waa mid aad loo jecel yahay by ugu gabdhaha iyo wiilasha dhallinyarada ah. Waa ma aha oo kaliya ah qalab ka dhimo wanaagsan, laakiin sidoo kale dhab ahaan soo jiidan karo indhaha dadka. Shiinaha Koowheel 2 jiilka longboard korontada (Dual brushless xarun-matoorrada) ayaa pack batari badeli, 2pcs baakad batteriga wuxuu socon karaa 60km, tag dheer. Its xawaaraha caadiga ah waa 30km / h, xawaaraha 42km / h ugu sareeya, si degdeg ah u tagaan. (ku xiran tahay miisaanka jidhka iyo xaaladda waddada) Ka sokow, tani waa skeidgareeyo koronto ogolaaday safarka Air, uma baahnid inaad wax laga walwalo dhibaatada hoyga ah ee dhan.
Haddii aad tahay gabadh fashion ama wiil, keeno skeidgareeyo korontada waa doorashadaada ugu fiican. Waxaad bilaabi kartaa ogaado adduunka waqti kasta oo wuxuu ku raaxaysan muuqaal qurux jidka. Jeclaan lahaa inaad leedahay safar wanaagsan oo kala duwan guga this.
waqti Post: Feb-28-2018